Rooble wuxuu dusha saartay fashilka Farmajo mas’uulka ka ahaa | KEYDMEDIA ENGLISH
Safarradii RW Roble ku kala tagay Qatar iyo dhusamareb ee Galmudug wuxuu ku lumiyay kalsoonida Beesha Caalamka iyo tan shacabka Soomaaliyeed sida xamaasadda leh loogu muujiyay.
Inuu u tagay waqti lumis ama muddo xileed dheereysi iyo dano dhaqaale;
In RW Roble soo raalli geliyo Madaxweyne Qorqor oo xurguf kala dhexeysay. Madaxweyne Qorqor wuxuu sugayay booqashada Madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaday Farmajo oo ku taageray dagaalka lagu hoobtay ee Bohol iyo Guriceel.
1. In hadalka iyo ficilka RW Roble is khilaafsan yihiin;
2. In Wasiirka Waxbarashada iyo Tacliinta Sare Inj. Cabdullahi Xaaji Abukar, Cabdullahi Carab uu saacad kasta ku lammaanan yahay RW Roble goob kasta iyo xaajo kasta, taaso ka baxsan dhaqanka dowladda, loona qaatay in RW Roble lagu aamini karin mas’uuliyadda uu shacabka Soomaaliyeed u hayo;
3. In hadallada RW Roble abuurayaan markasta saluug, fajac, iyo welwel badan;
4. In dhawr mar RW Roble ku kacay tallaabboyin lagu maadeysto;
5. In RW Roble laga faafiyay warar ka soo horjeeda muuqal diimeedka uu muujinayo;
6. In safarka RW Roble ku tagay Qatar ay wax weyn ka beddeshay dhaqankiisa siyaasadeed, dadweynahana shaki badan gelisay;
7. In RW Roble si buuxda u aqoonsan halista dalka ku jiro oo Farmajo iyo Fahad Yaasin ku rideen 4tii sano ee la soo dhaafay. Waxaa la yaab ah in xukuumadda RW Roble, Wasaaradda Amniga , aysan ka hadlin, dadweynaha u caddeyn u faahfaahin arrinta Drones lagu qabtay Garoonka Diyaaradaha Muqdisho ee Xildhibaan Zakariya Xaaji Cabdi sheeganayo.
8. In RW Roble doorashada federaalka ka dhigay riwaayad TV laga daawado iyo inuu ku biiray burcad abaabulan (organized criminals) oo magaca dowladda federaalka ugu shaqeysaneysa si sharcidarrada ah danahooda iyo dano ajnabi.
Waa calool xumo weyn ah in RW Roble dusha saarto fashilka dowladda federaalka oo Farmajo iyo kooxdiisa mas’uulka ahaayeen. Ummadda Soomaaliyeed iyo Beesha Caalamka aad ayey ugu hanweynaayeen RW Roble, waxayna ka sugayeen inuu Soomaaliya ka badbaadiyo haadanta Farmajo iyo kooxdiisa - Nabar iyo Naxdin - ku tuureen. Ma jirto sabab RW Roble ugu safro Galmudug iyo deegammo kale si loo qabto doorashada Golaha shacbiga. Haddii DG-yada ama guddiyada doorashada ka gaabiyaan gudashada xilkooda, RW Roble wuxuu haysta awood iyo taagerada Beesha Caalamka uu ugu kallifo inay gutaan shaqada laga rabo ama ay la kulmaan cadaadis iyo ciqaab aysan qaadi karin.